भिजिट भिषा रोकेर समस्या समाधान हुन्न - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
भुपराज बस्याल युएई-
भिजिट भिषा निश्चित समयका लागि घुम्न आउने पर्यटकका लागि दिइने भिषा हो । तर घुम्न आएको व्यक्तिले आफूलाई सुहाउँदो र गतिलो रोजगारी पायो भनें के गर्ने ? सायद यहि भएर हुन सक्छ, युएई सरकारले यहाँ आउ, हेर र चित्त बुझ्यो भनें काम गर भनेर नै होला, भिजिट भिषामा आएर यहिं काम खोजेर पनि गर्न पाइने र भिषाको अवस्था परिवर्तन गर्न पाइने नियम बनाएको ।
प्रसङ्ग हो भिजिट भिषामा युएई आउने नेपालीलाई रोजगारी नदिन नेपाल सरकारले युएई सरकारलाई गरेको आग्रहको । यो समाचार बुधबार देशपरदेशमा प्रकाशित भएसँगै यसका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाएर धेरै मान्छेलाई ठग्ने मेनपावर व्यावसायीलाई कारवाहीसँगै धरौटी बढाउने भन्दै सञ्चार माध्यममा निकै छाएका मन्त्री गोकर्ण बिष्टको यस्तो निर्णयले एउटा तरंग नै पैदा गरेको छ युएईको नेपाली समाजमा ।
हुनेखानेका छोराछोरी पढ्न युरोप जान्छन् । तर त्यहाँ जाने मध्ये अधिकाँशले उतै कमाउँदै पढ्ने हो । कतिपय त पढ्ने भन्दै कमाउने उद्धेश्यले नै नेपालबाट उड्ने हो । उनीहरुले त्यसरी गएर काम गर्न पाउँछन् । तर खाडीमा आएकालाई काम गर्न नदिन आग्रह गर्छ सरकार । यो त समस्याको जड पत्ता लगाउन छोडेर सरकारले सतही ब्याख्या गरेको भएन र ? यदि सरकारले भिजिट भिषामा आउने व्यवस्थालाई सरल नबनाउने हो भनें यसले दलाललाई अझ टेवा पुग्ने आशंका गर्नेहरु उत्तिकै छन् ।
युएईमा नेपाली मात्रै होइन अन्य विभिन्न देशका नागरिकहरु भिजिट भिषामा आएर काम खोजेर यहिं रोजगारीमा संलग्न हुने गर्दछन । युएई सरकारले पनि केही रकम तिरेपछि भिजिट भिषामा आएकाहरुलाई कामदार भिषा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनैपनि कम्पनीले प्रायः अलिक ठूलो काममा कामदार राख्दा उसको ज्ञान, दक्षता, सीप हेरेर मात्रै राख्ने गर्दछ । त्यसका लागि उ युएई भिजिटमा आउनै पर्ने हुन्छ । भिजिटमा युएई आउँदा अन्य देशका नागरिकको भिषा लाग्ने तर नेपालीको भिषा नलाग्ने भएपछि स्वतः त्यस्ता महत्वपूर्ण पदमा अन्य देशका नागरिक चयन हुन्छन् । अन्य देशका नागरिकले पाएको सुबिधाबाट नेपाली किन वन्चित हुने भन्ने प्रश्न हो ।
हुनत पछिल्लो समय भिजिट भिषामा युएई आएर अलपत्र परेका नेपालीहरुको कथा सुनेर मन्त्री विष्टले यस्तो आग्रह गरेका हुन् सक्छन् । तर समस्या त सम्पुर्ण वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा छ । त्यसो भए वैदेशिक रोजगारमा नै जान बन्द गर्ने त ? त्यसैले बन्द कदापी समस्याको समाधान हुँदै होइन । समस्याको चुरो पहिचान गरि त्यसको समाधानका उपाय खोजिनु पर्छ ।
साँच्चै समस्याको समाधान खोज्ने हो भनें यसो गरौं भन्ने पंक्तिकारको सुझाव छ ।
१. नेपाली नागरिक सम्बन्धित देशको भिजिट भिषा, आते जाते टिकट, होटल बुकिङ र एक हजार डलर लिएर एयरपोर्ट गयो भने उ सजिलै आउन पाउँदैन । विभिन्न बहाना गरेर उसलाई फर्काइन्छ । तर सोही ब्यक्तिले दलाललाई मोटो रकम खुवायो भनें त्यहि प्रकृयाबाट आउन पाउँछ । नेपालको अध्यगमन कार्यालयले आफ्नो अनलाइनमा राखेको कागजपत्र पूरा गरि उ जान लाग्दा किन रोकिन्छ ? यदि यस्ता रोकिएका ब्यक्ति मोटो रकम दिएर पुनः युएई आएका प्रमाण पङ्तिकारसँग प्रसस्तै छन् ।
अब कुरो रह्यो ६० हजारमा जान सक्ने ब्यक्तिले २ लाख ५० हजार तिर्न परेपछि युएईको भिजिट भिषाको काम “नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” भनेजस्तै भएको छ । मोटो रकम तिरेर युएई छिरेपछि उ त्यसै फर्कन सक्दैन र कामको खोजीमा भौतारिन्छ । यदि उ ६० हजारमा युएई आउन सकेको भए काम नपाएको खण्डमा उ सहजै नेपाल फर्किन सक्थ्यो । फेरि त्यति मोटो रकम लिने बेलामा दलालले पनि विभिन्न प्रलोभनमा पारेको हुन्छ । देखाईएको प्रलोभन अनुसारको काम नपाएपछि उ बल्ल ठगिएको महसुस गर्छ जतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । अनि उ पीडित बन्न पुग्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस्तै दलालले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मोटो रकम तिरेर आएका मात्रै भेटिन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि सहजै आउन दिने हो भनें यस्तो भिजिट भिषाले अहिले देखिएको जस्तो समस्या हुन्न ।
२. आफ्ना नागरिक अन्य देश गएर अलपत्र नपरुन् भन्दै भिजिट भिषामा जाँदा सरकारले विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित देशको भिजिट भिषा, दुई तर्फी टिकट, होटल बुकिङ र १ हजार डलर आवश्यक पर्ने । यो नेपालको अध्यागमले आफ्नो अनलाइनमा उल्लेख पनि गरेको छ । साँच्चै सरकारले आफ्ना नागरिक अरु देशमा अलपत्र नपरुन भन्ने सोचेको हो भने यी कागजातमा अरु कुरा थप्न सकिन्छ । जस्तै १२ कक्षा वा त्यो भन्दा माथिल्लो तह उत्तिर्ण गरेको सर्टिफिकेट जसले गर्दा भाषामा समस्या नहोस् । अथवा नागरिक अलपत्र पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भिजिट भिषामा जानेहरुसँग सुरुमै निश्चित रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्न लगाउन सकिन्छ जसले गर्दा त्यसरी गएको कुनै व्यक्ति समस्यामा पर्यो भने सम्बन्धि दूतावासले त्यही रकमबाट टिकट काटेर उसलाई नेपाल फर्काउन सक्दछ । यसले भिजिट भिषामा देखिएको समस्या पनि हल हुन्छ र भविष्यमा कुनै समस्या आइपरेमा उद्धारमा पनि अप्ठ्यारो हुन्न । सँगसँगै हाल भिजिट भिषाको नाममा दलाली र एयरपोर्टमा हुने सेटिङ पुरै रोकिन्छ ।
अन्त्यमा खाडीमा घरेलुु कामदार समस्यामा परेको भन्दै घरेलु कामदारका रुपमा आउन लगाएको रोक, सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याएको फ्री भिषा फ्री टिकटको व्यवस्थाले जुन अप्ठ्यारो सरकारलाई पारेको छ यसले पनि त्यही अप्ठ्यारो पार्दछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय गर्नु भन्दा पनि टिकाउ निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।
(युएईमा कार्यरत बस्याल नेपाल पत्रकार महासंघ, युएई शाखाका अध्यक्ष हुन् । यो सामग्री २०७५ असोज १२ गते प्रकाशित भएको हो)